‘व्यवसायीको हितमा काम गर्ने सक्षम युवा हुँ’
प्रकाशित मितिः जेठ 15, 2076
3035 पटक पढिएको
धरान–१९ का दिनेश राई परिचति नाम हो । उनी धरानमा सबैको लोकप्रिय पात्र हुन् । धरानलाई लागुऔषध दुव्र्यसन मुक्त सहर बनाउनको लागि रिकभरिङ धरानको अध्यक्ष भएर दुव्र्यसनमा फसेकाहरुलाई सुधार्ने काम गरें ।
युवा वर्गमा मात्रै होइन उनी धरानका लब्ध प्रतिष्ठितदेखि सामान्य वर्गका मानिसहरुसँग पनि उत्तिकै परिचित छन् । सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील रहेका राई यही जेठ २७ गते सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा भाग लिई चुनाव जितेर धरानका व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने योजनामा छन् ।
उनी २०७२ सालदेखि उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सदस्यमा रहेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा क्रियाशील समेत रहेका थिए । धरान व्यवसायीहरुले पनि पूर्ण रुपमा साथ दिने राईको दाबी छ । संघको वाणिज्य तर्फबाट सदस्य पदमा उम्मेवारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रने उनै युवा व्यवसायी दिनेश राईसँग औजारले चुनावी सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानीः
को हुन् दिनेश राई ?
जन्मः २०३१ साल चैत १३ गते (धरान–१९)
बुवाआमाः स्व.रामप्रसाद राई । भक्ति राई ।
प्रारम्भिक शिक्षाः श्री शिक्षा निकेतन मावि
उच्च शिक्षाः महेन्द्र क्याम्पस धरान
सामाजिक संघ सस्थामा आबद्धः तायोमा सप्लार्यसका सञ्चालक–धरान–१९
पूर्व रिकभरिङ धरानको अध्यक्ष
युवा संघ नेपाल प्रदेश कमिटी सदस्य
इलाका प्रहरी कार्यालय धरान हिरासत भवन निर्माण समिती सदस्य
भानुचौक बसपार्क संरक्षण समितीको संयोजक
घोपा ट्याक्सी व्यवसायी संघको सल्लाहकार
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र सदस्य लगायत दर्जनौ संघसस्थामा आवद्ध ।।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा तपाई कहिलेदेखि आबद्ध हुनु भयो र किन ?
म सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघमा २०७२ साल असार ३१ गतदेखि निरन्तर रुपमा आबद्ध छु । सुरुमा साधारण सदस्य भएर संघ मार्फत् प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा धरानका व्यवसायिहरुसँग नजिक भएर काम गर्दैछु । व्यवसायीहरुको छाता संगठनमा युवा नेतृत्वको कमी महसुस गरें । त्यसैले संघमा युवाको पनि प्रतिनिधित्व आवश्यक छ, त्यसका लागि म निरन्तर लागिरहेको छु । किन की युवा नेतृत्व भनेको देशकै अभिन्न अंग हो । तर विडम्बना युवाहरु बेरोजगारी भएर बस्नु पर्ने अवस्था रहको छ । कि त विदेश पलायन हुनु पर्ने दुःखदायी अवस्था छ । तर स्वदेशमा नै युवाहरुलाई रोजगार दिएर स्वलम्वन बनाउनु पर्छ । ताकी युवालाई यूज एण्ड थ्रो मात्रै गर्नु भएन । धरानमा रहेका युवालाई स्वलम्बन बनाउने माध्यम भनेकै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ हो । संघ मार्फत् युवाहरुको लागि विशेष योजना बनाएर कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । जसले युवाहरु स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्न सकुन् भन्ने मेरा चाहना छ । त्यसैले म संघमा यहीँ युवाहरुको लागि नै केही गरौं भनेर निरन्तर साधारण सदस्य हँुदै अहिलेसम्म आइपुगेको छु । अब भने धराने युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै आगामी जेठ २७ गते हुने निर्वाचनमा वाणिज्य तर्फबाट म सदस्य पदको उम्मेद्वारी दिँदैछु ।
तपाईलाई धरानका व्यवसायीले किन जिताउने त ?
मुलत युवालाई रोजगारीको माध्यमबाटै स्वरोजगार बनाउने मेरो मूल उद्देश्य हो । त्यसैगरि धरानका व्यवसायीहरु विभिन्न वाहनामा चन्दा आंतकबाट पीडित भइहरेको अवस्था छ । यो बाहिर देखिएको छैन तर भित्र चन्दा आंतकले व्यवसायी हैरानी छन् । यसलाई नियन्त्रण गरी धरानका व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति सहज बनाउने मेरो दोश्रो उद्देश्य हुनेछ । उद्योग वाणिज्य संघ मार्फत् व्यवसायीको हितमा काम गर्ने म सक्षम युवा हुँ । मेरो सम्पूर्ण समय नै संघको हितमा खर्चने छु । म जति बेला पनि व्यापारीलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको बेला उपस्थित हुन सक्छु । १२ वजे राती किन नहोस्, व्यापारीलाई सहयोग गर्न तत्पर छु । धरानमा अहिलेको आवश्यकता भनेको रात्रीकालिन बजारको माग छ । यसलाई हामी धरानेले सबै तह तप्काबाट सहकार्य गरेर धरानको मागलाई पूरा गर्नुपर्छ । किन की धरान पर्यटकीय क्षेत्र समेत पनि हो । त्यसैले धरानमा आउने पर्यटकको लागि मनोरञ्जन पनि आवश्यक छ । आवश्यकता र मनोरञ्जनको पाटोमा पनि धरानले ध्यान दिएको खण्डमा आर्थिक पाटो मात्रै नभएर समग्र धरानको विकासमा टेवा पुग्छ ।
तपाईले जित्ने आधार के–के हुन सक्छ त ?
धरानका सम्पूर्ण युवा व्यवसायीहरु मेरो पक्षमा छन् । धरानमा युवा व्यवसाय मात्रै होइन धरानकै अग्रज व्यवसायीहरुको पनि मलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग हुने भएकाले मेरो जित सुनिश्चित छ । अब उवा संघमा युवा नेतृत्वको पनि खाँचो छ । युवा नेतृत्वबाट धरानको व्यापार व्यवसायलाई माथि उठाएर धरानलाई उद्योगी व्यापारीहरुको शहर भनेर परिचित गराउने पर्ने आवश्यकता छ ।
धरानको व्यवसायीको समस्या के–के छन् ?
समस्या बिकराल छ । आफ्नो पुँजीबाट पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । जसका कारण धरानका व्यवसायी पलायन समेत हुँदैछन् । सरकार व्यापारी व्यवसायीलाई दुध दिने गाई मात्रै ठान्दछ । तर दुध लिएपछि गाई स्याहार सम्भार पनि आवश्यक हुन्छ । तर सरकारले भने एकोहोरो व्यवसायीबाट विभिन्न वाहनामा रकम असुली मात्रै रहेको छ । चाहे,त्यो करको नाममा होस् अथवा अरु नै वाहनामा । स्थानीय समस्याहरु धेरै नै छन् । त्यो समस्याको समाधानको लागि पनि मैले यसपटक उम्मेद्वारी दिएर काम गर्ने ढृढ संकल्प लिएको छु ।
युवाहरुलाई कसरी समेट्नु हुन्छ त ?
धरानका अधिकांश युवाहरु स्वयम् पनि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघप्रति परिचित छैनन् । त्यसैले अब मेरो प्रयासले धरानका युवाहरुलाई संघ प्रतिको उतरदायित्व महसुस गराउने छु । जसका कारण संघ मार्फत् युवाहरुले पनि केही गरौं भन्ने भावनाको विकास हुनेछ । युवाहरुसँग बसेर छलफल, सहकार्य गरी धरानमा युवाहरुलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि मेरो ध्यान विशेष केन्द्रित हुनेछ । यो मैले अहिले बोलेको कुरा पुरा गर्ने समेत प्रतिबद्धता म यसै पत्रिका मार्फत् गराउँदछु ।
धरानमा उद्योग धन्दा एकदमै न्युन छ, यसको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ?
सकिन्छ । प्रशस्त आधारहरु छन् । तर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातारण अनुकुल छैन । लगानी गर्न पनि सकिन्छ । सरोकारवाला निकाय जस्तै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले चासो र योजना बनायो भने सम्भव छ । तर धरानमा विरोध गर्ने परिपार्टीको विकास भएकाले पनि वातावरण अनुकुल छैन । धरान उपमहानगरमा समायोजन भएको क्षेत्रहरु साविकको विष्णुपादुका र पाँचकन्या कृर्षी क्षेत्रमा निकै अगाडि छ । त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरु बेसार, अदुवा, अम्लिसो, तरकारीजन्य वस्तुहरुको उचित ढंगबाट व्यवस्थापान गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा धरानको अािर्थक विकासमा सहयोग पुग्नेछ । तर यस तर्फ यहाँ राजनीति पाटी लगायत सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ ।
अब अन्त्यमा उद्योगी ब्यवसायीलाई केही भन्नु छ ?
म फेरी आग्रह गर्न चाहन्छ धरानका सबै उद्योगी ब्यवसायीलाई सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको यो चुनावबाट मलाई अमुल्य तपाईहरुको भोट दिएर मलाई जिताउनु हुने भन्ने पूर्णविश्वास छ । अब उद्योग वाणिज्य संघमा युवा नेतृत्वको पनि आवस्यक छ । उद्योगी ब्यवसायीका समस्या हल गर्न नयाँ सोच भएका युवाहरुको नेतृत्व आवश्यक छ । म धरानमा नै रहेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै यही धरानको विकासमा लागि परिरहेको छु । अझै धरान र यहाँका व्यापारी र व्यवसायको हितमा काम गर्नको लागि सम्पूर्ण व्यापारी र व्यवसायको सहयोग र साथ आवश्यक छ । यसै औजार दैनिक पत्रिका मार्फत् आगमी जेठ २७ गते हुने निर्वाचनमा मलाई अत्याधिक मतले विजय गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।